ပီကာဆို ပန်းချီပြပွဲ သို့တခေါက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » ပီကာဆို ပန်းချီပြပွဲ သို့တခေါက်
Posted by zoe on Jul 23, 2011 in Celebrity, Cultures, History | 12 comments
Musee National Picasso-Paris National Museum of History Picasso zoe
ပီကာဆို ပန်းချီပြပွဲကို ဂျွန်လ ၁၈ရက် မှ စက်တင်ဘာ ၁၈ရက်အထိ National Museum of History မှာ ပြသထားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နံနက် ၉နာရီ မှ ည ၉နာရီ အတွင်း လေ့လာနိုင်ပါ တယ် ။ ဝင်ကြေး မှာ အများပြည်သူ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၂၈၀ ၊ ကျောင်းသား/သူ ၂၅၀ နဲ့ သက်ကြီး ၂၂၀ တို့ဖြစ်ကြပါ တယ် ။ ပြပွဲမှာ ပီကာဆို ပန်းချီ ၆၂ ကား ၊ ရုပ်ထု လက်မှုအနုပညာ နဲ့၊ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံ များကို ပြသထား ပါတယ် ။ ဒီပြပွဲ ကို ကုမ္ဘဏ် နဲ့ အဖွဲ့အစည်း ၁၅ခု က sponsor လုပ်ထားပြီး အဓိက sponsor က Taishin Bank ဖြစ်ပါတယ် ။
ပြခန်း တွင်းဓာတ်ပုံမရိုက်ရ လို့၊ ပြခန်းအပြင် ကပိုစတာ တွေပဲ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ ရပါတယ် ။ ရောက်သွား ချိန် ဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လည် ၁နာရီ လောက်ရှိပေမဲ့ လူသိပ် မနည်းတာ ကိုတွေ့ရပါတယ် ။ ပထမထပ် နဲ့ ဒုတိယ ထပ် မှာပြခန်း လုပ်ထားပါတယ် ။ အဝင်ဝ ညာဖက် မှ ဒုတိယထပ် ကစပြီး ပထမထပ် ဘယ်ဖက် အရောင်းဌာနမှာ အဆုံးသတ် ပါတယ် ။ အရောင်း ဌာန မှာပြခန်း catalogue ၊ ပိုစတာ ၊ ပို့စကတ် ၊ မာတ်ခွက် ၊ key chain, T-shirt အစရှိသည်တို့ ကိုရောင်းချပါတယ် ။ ပြခန်း ကနေ MRT ဂိတ် ကိုအခမဲ့ shttle-bus လဲစီစဉ် ပေးထား တယ် ။ ပုံ (၁)
ဒီပြပွဲမှာ ၁၄နှစ် အရွယ် ပီကာဆို ရဲ့လက်ရာ The Barefoot Girl နဲ့ သူ့ဘဝနဲ့အနုပညာ မှာ မဖော်ပြရင် မပြည့်စုံနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီး ၂ဦး ဖြစ်တဲ့ Marie Therese Walter နဲ့ Dora Marr ပုံလည်း ပြထားပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ နံမည် အကြီးဆုံး ပုံ Les Demoiselles d’Avignon (1907)နဲ့ Guernica (1937) ၂ပုံ တော့ မတွေ့ ရပါ ။
The sculptor, Sleeping woman with shutter, Woman sitting inared armchair, The embrace , Seated Girl, Bust ofawoman နဲ့နုစဉ် သမရိုးကျ ရေးနည်း နဲ့ ဆွဲထားတဲ့ Man withamoustache, Portrait ofaman withacap, Head ofawoman, Paul as pierrot စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။ Edward Manet ရဲ့နံမည်ကျော် Le De’jeuner sur l’herbe ကို မတူ တဲ့အမြင် နဲ့ပြန်လည် ရေးဆွဲထားတဲ့ပုံကို လည်းပြသ ထား ပါတယ် ။ ဒီ ပို့စ မှာ တော့ ကောင်း နိုးရာရာ ကြည့်ခဲ့ ရတဲ့ ပုံအချို့ ကို internet ကပဲ download တင်ပေးထား ပါ တယ် ။
National Museum of History ဝင်းအပြင် ပိုစတာ
အဝင်ဝ ရှိ ပိုစတာ
Paulo as Pierrot ပိုစတာ
လူငယ်ဘဝ Picasso ပိုစတာ (ရှေ့ကကြိုးကိုသတိ မထားမိလိုက်ဖူး )
အမှတ်တရပစ္စည်း အရောင်း ဌာန
National Museum of History အဝင်ဝ
Portrait of Dora Maar (1937,11.23 ) 55.3x46.3 cm
Portrait of Marie-Therese (1937.12.4) 46x38 cm
The sculptor (1931.12.7) 128.5x96 cm
Sleeping woman with Shutters (1936.4.25) 54.5x65.2 cm
Paul asaPierrot (1925.2.28) 130x97 cm
Le Dejeuner sur l'herbe - Manet
Le Dejeuner sur l'herbe - Picasso (1960.3.3-8.20) 130x195 cm
kanebo က ထုတ်တဲ့ ဆပ်ပြာခဲတစ်မျိုး ရဲ့ ဘူးခွံ မှာ ပီကာဆို ရဲ့ လက်ရာ မိန်းမပျို ပုံလေး ပါရှိပါတယ် ။ ဒီတစ်ခါ ဈေးဝယ်ထွက်ကြရင် ကြည့် ကြည့် ကြပါဦး ။ မွှေးလည်း တော်တော် မွှေးပါတယ် ။ အကြာကြီး တော့ အသုံးမခံဘူး ဗျ ။
ပီကာဆိုထက် ပီဇာကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ် ….
တမင်တကာကို ရပ်ထားတာဆိုရင်တော့… ခွင့်လွတ်ပါ..။
အမှတ်ထင်ထင် ကျန်ရစ်နေတဲ့ ပုံပြင်လိုလိုလေးတခုအကြောင်းတိုတိုပြောပြမယ်..။
တနေ့.. ပီကာဆိုရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းတယောက်က ပီကာဆိုနာမယ်ကြီးလွန်းတော့.. သူ့သူငယ်ချင်း ပီကာဆိုဆွဲတဲ့ ပုံတပုံလောက် အိမ်မှာချိပ်ချင်တာမို့ .. ပီကာဆိုဆီအလယ်သွားသတဲ့.။
ပန်းချီအတွက် စကက်ရှ်..ပုံကြမ်းခဲနဲ့ခြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုတွေ့တယ်ဆိုပါစို့..။
ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်တော့.. အနားကအမှိုက်ပုံးထဲ.. ပီကာဆိုလက်မှတ်ထိုးပြီး စိတ်ကြိုက်ရှိပုံမရပဲ ပစ်ထားတဲ့.. စကက်ရ်ှတခုတွေ့တာနဲ့.. ကောက်ယူပြိး.. သူငယ်ချင်းကို.. အဲဒါလေး သူကို့ပေးဖို့ပြောတယ်..။
ပီကာဆိုက.. အင်း..အဲဒါအတွက်.. ဒေါ်လာ၁သိန်းပဲပေးသွားပါလို့..ပြန်ပြောသတဲ့..။
သူကြီး ရဲ့ဗီတို ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မှပဲ ပို့စ မြန်မြန်တင် ဖြစ်တယ် ဖြစ်သွားရတာ နို့မို့ရင် ဘယ်အထိ အချိန်ဆွဲ နေအုန်းမယ် မသိ ။ ပုံနည်းနည်း ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ် ။
ပြခန်းထဲကို ၀င်ကြေးမပေးရပဲနဲ့ ရောက်သွားသလိုပဲ ခံစားရပါတယ်။ ခုလိုလေးတွေ ဖော်ပြပေးပါဦးနော်… သွားစရိတ်လည်းသက်သာ ၀င်ကြေးလည်းမလိုပဲ ပန်းချီကားတွေကို အလကားကြီးရတာ အတော်အမြတ်ပါပဲ။
Thanks for the post and the wonderful pictures.
Takes much time and effort to do this kind of post.
မမြင်ဖူးသေးတဲ့ ပန်းချီကားတွေကို အချိန်မကုန် ငွေမကုန် လူမပင်ပန်းဘဲ ကြည့်ခွင့်ရလိုက်တာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပန်းချီကားတွေကြည့်ပြီး တစ်ကားချင်းစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို စဉ်းစားမိပါတယ်
ပန်းချီ မျက်စိမရှိပင်မဲ့ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ပြသခဲ့တဲ့ ပီကာဆိုရဲ့ပန်ချီကားတွေကို ကြည့်ခွင့်ရတဲ့ အတွက်
ကွန်မဲန်း ပေးသူ နဲ့အားပေးသူအားလုံး ကိုကျေးဇူးတင်ပါ ။ နောက်ကိုလည်း ဒီလိုပွဲမျိုးရှိရင်တင်ပေး ပါမယ် ။